3 ngwaọrụ dị egwu ị ga-ama banyere Lean Six Sigma | Ọ BỤ
3 ngwaọrụ dị egwu ị ga-ama banyere Lean Six Sigma
Lean Six Sigma bụ ndokwa nke usoro na ngwaọrụ maka mgbanwe usoro. Onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Bill Smith na-enye ya mgbe ọ na-arụ ọrụ na Motorola na 1986. Jack Welch mere ka ọ dị mkpa maka usoro azụmahịa ya na General Electric na 1995. Taa, a na-eji ya dịka akụkụ nke ọtụtụ nhazi nke usoro.
Ọ na-ele anya ịme ka ọdịdị nke usoro ahụ dịkwuo mma site n'ichepụta ma chụpụ ihe kpatara ezughị okè ma belata nchekasị na mgbakọ na ụdị azụmahịa. Ọ na-eji ndokwa nke usoro nchịkwa bara uru, ihe ka ukwuu n'ime ememe, usoro eziokwu, ma na-eme ka mmadụ dị iche iche dị n'ime ndị ọkachamara na usoro ndị a. Sigma isii ọ bụla gbasatara n'ime otu mkpakọrịta na-ejikọta usoro nhazi nke a na-ejikọta ya ma jiri nlezianya na-elekwasị anya, dịka ọmụmaatụ: belata usoro usoro usoro, belata mmetọ, belata ọnụahịa, ntinye ntanye nke ndị na-eji ihe eji eme ihe, na uru ntụgharị. 3 ngwá ọrụ dị egwu ị ga-ama banyere Lean Six Sigma:
Ebube Bel Sigma isii
Ọkara isii Sigma Green Belt
Sigma Black Belt isii
1. Ọkara Sigma Yellow Belt Training & Certification
Akwụkwọ Nlekọta Belt Belt
Ọrụ ndị dị na Belt Belt
Nkụzi Ọzụzụ Na-eweta
Ntuzi nkuzi n'ime isi ihe nke isii Sigma.
Mmetụta nke Asambodo Yellow Belt na Ọrụ Gị
2. Sigma Green Belt Training & Certification
Green Belt Certificate General
Ọrụ nke akwụkwọ agba isii nke Sigma Green Belt
Ezigbo eji eme ihe maka Green Belt Training na Asambodo
Kedu ihe omume anyị dabara n'ọrụ gị
3. Lean isii Sigma Black Belt Training & Asambodo
Black Belt Certificate isi
Ọrụ nke akwụkwọ isii Sigma Black Belt
Ihe omuma nke isii nke Sigma Philosophy of Improvement Process
Ihe Omume nke Sigma Black Belt Certification
"Nke abụọ ọ bụla" ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ nwere ike ịkwado na ị nwere ike ịkụziri anyị ihe ọmụma isii na Sigma Yellow Belt. Ma anyị na-eche na ihe ndekọ gị na-emeghere gị n'oge ọ bụla ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ gbasara isii Sigma Yellow Belt Certification, izu ike na-eme ka obi sie gị ike na Team Care Team ga-enye gị ike ị nweta ihe kachasị na ntanetị gị.
Onu ogugu isii nke Sigma na-akwadebe ihe omuma nke usoro isii nke Sigma, nha ya, na mgbanwe di mkpa. Azu eriri na-akwado ozi gbasara otu esi achikota isii Sigma na-abata maka mgbanwe nke okike na ihe ndị dị na ya bara uru iji mezuo ọchịchọ ndị ọkachamara na isi nchekasị maka mkpakọrịta ha.
A na-enwe Yellow Belt nwere ihe mmụta dị mkpa nke isii Sigma, ma ọ dịghị eduga naanị ya. Ugboro ugboro ha na-ahụ maka ọganihu nke map ndị na-emepụta iji mee ka ndị isii Sigma kwadoro. A Belt Belt na-achọ mmasị dị ka onye ọrụ ime obodo ma ọ bụ onye isi isiokwu (SME) na ntinye ego ma ọ bụ ọrụ. Ọzọkwa, Yellow Belts nwere ike na-achịkwa mgbe ọ bụla na-agba ọsọ na-agbanwe usoro nhazi nke eji usoro atụmatụ PDCA (Atụmatụ, Do, Check, Act). PDCA, bụ nke a na-edekarị dị ka Wheel Wheel, na-enye ike Yellow Belts iji mata ọdịiche dị iche iche nke nwere ike irite site na mgbanwe. A na-eme ka Bel Bel ma ọ bụ Black Belt dị elu karịa mgbe ọ bụla a na-eji usoro DMAIC eme ihe iji kwalite ego nkwụnye ego nke na-eji Statistical Process Control.
Ebube Bel isii nke Sigma na-akwadebe maka okwu nhazi iji dozie nchịkwa na isi ihe dị iche iche nke isii Sigma, na-enye ndị ọrụ ohere ịghọta usoro nke ọma, na-enye onye ọ bụla ume inye aka dị ukwuu n'iji mezuo ebe niile. Ihe ntinye aka nke isii nke Sigma Yellow Belt na-aga n'ihu:
Ndi nnochite anya nke ndi nnochite anya ha na isii Sigma
Ndị ọrụ na-azụ isii na Sigma
Ihe omumu nke oru ubochi nile (na - eme ka uzo nke usoro di iche iche, mma nke oma, na ihe nfe n'efu)
The Yellow Belt na-achota ozi, na-etinye aka na nche echiche ma na-agbakwụnye nkwonkwo ha na usoro nyocha. Ọ bụghị nanị Yellow Belts na-anakọta ihe ndị dị mkpa iji chọpụta, nchịkwa na ịchịkwa uru na-eri nri na usoro nke ha, ma agbanyeghị na ha ga-edozi data ahụ na Black Belts na Green Belts na-ewere égbè na nnukwu ụlọ ọrụ.
Rịba ama: Enweghị ihe ọ bụla dị mkpa maka ọrụ ọ bụla. Imirikiti ihe ndị ị ga-amụta na Yellow na Green Belt Mmemme na-emegharị na Black Belt Certification Programme. A na-agba mbọ ịchọta ihe ọ bụla ị chọrọ ịhọrọ n'ime usoro Green ma ọ bụ Black Belt ka ọ rụọ.
Ogwe agụmakwụkwọ edozi isii nke Sigma Online nke Yellow Belt kwekọrọ na nke American Society for Quality (ASQ) maka asambodo nke Black Belts. Dịka onye gụsịrị akwụkwọ na isii Sigma, ị gaghị enwe mmetụta maka ọrụ gị, ma na ndụ gị.
Ihe omume omumu akwukwo isii nke Sigma Green Belt na nke akwukwo nke American Society for Quality (ASQ) bu maka asambodo Green Belts. Dị ka nke isii Sigma Online Green Belt gụsịrị akwụkwọ, ị gaghị eme ka ọrụ gị dị mma, ọ bụ ezie na ị gbanwere akụkụ niile nke ndụ gị. Dee taa ma bido n'usoro iji nweta ikikere isii Sigma Green Belt na ihe nke sekọnd.
Otu Belt Belt nke isii na-akwadebe ndị na-eme ka nkwalite echiche ndị dị oké egwu, na nkwenye na DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) ngosi. Sigma Green Belt isii na-akwado onye ọrụ ahụ ka ọ bụrụ onye ọrụ kwadoro ya na mpaghara ya. Nzube a na - ekwe ka Green Belt kpochapụ obere ihe, na - akọwapụta isii achụmnta ego Sigma, na - achọghị ọrụ Black Belt zuru oke na isii Sigma niile site na mkpakọrịta ahụ.
Green Belt nwere ozi abụọ dị mkpa: iji malite, inye aka n'ụzọ dị irè usoro isii Sigma, na nke abụọ, iji mee mgbanwe dị ukwuu n'ọtụtụ dị n'ime ógbè ha. Iji mee ka ndị mmadụ nwee ike imepe, Green Belts nwere ike ime akụkụ dị ịrịba ama nke ọrụ ụkwụ na ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma na -ele ule na nkwado nke Black Belt. Ha bụ ndị ọkachamara na itinye ego 25% nke ike ha n'ọrụ isii Sigma nke aka ha ma ọ bụ na-akwado nkwado nke Black Belt. N'ime ọzụzụ isii nke Sigma Green Belt ị ga-achọpụta otú ị ga-esi jiri akụkụ dị elu nke isii Sigma na-eche echiche echebara echiche na ihe ndị dị nro iji gbakwunye na njedebe nke mkpakọrịta gị.
Ma oru ndi mmadu, ego, nzuko, ochichi, ma obu ihe ndi ozo di iche iche ma o bu ihe ndi ozo... Isii Sigma Green Belt Training zuru oke maka onye obula n'ele anya inweta ihe kariri oru ha. Ndị nyocha ga-achọpụta otú ị ga-esi tinye usoro ntanetị maka ịkwalite mgbanwe ịzụ ahịa dị ka:
Management Project Iji DMAIC na DMADV
Na-emesi ike na "Nkọwapụta" na "Mụọ" Ụzọ nke DMAIC
Nhazi usoro omume na usoro nha
Rịba ama: Enweghị ihe ọ bụla a chọrọ iji rụọ ọrụ ọ bụla. Akuku akụkụ nke ihe ị ga-amụta na Yellow na Green Belt Programs na-agbanye na Black Belt Certification Program. A na-agba mbọ ịchọta ihe ọ bụla ị chọrọ ịhọrọ n'ime usoro Green ma ọ bụ Black Belt ka ọ rụọ. Sigma Online Sigma Online Sigma Green Belt Training and Online Lithuania agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ hà yiri nke American Society maka Ogo (ASQ) ọkọlọtọ nke asambodo maka Green Belts. Dị ka akwụkwọ isii nke Sigma Green Belt na-agụsị akwụkwọ, ị gaghị enwe mmetụta na ọrụ gị, ma na ndụ gị.
Ihe omuma akwukwo isii nke Sigma Black Belt nke anyi na-acho nke akwukwo asusu nke American Society for Quality (ASQ) maka ndi ozo. Site na Asambodo Sigma Black Belt nke isii gị, ị gaghị enwe mmetụta na ọrụ gị, ma na ndụ gị. Ọ bụrụ na isii Black Belt certification nwere ike ịgbanwe ndụ gị.
Ọzụzụ Sigma Black Belt nke isii anyị na-enye ihe ọmụma kpụ ọkụ n'ọnụ nke ụzọ isii Sigma nke nghọta na ụkpụrụ (na-atụle na-akwado ngwá ọrụ na ngwaọrụ). Black Belt gosipụtara nghọta nke nchịkwa nke otu, ịga n'ihu otu, ma jiri ndị ọrụ ibe na-arụ ọrụ na ọrụ. Ọzụzụ Black Belt na-emepụta nghota nke ngosipụta DMAIC dịka ọ bụ ụkpụrụ isii Sigma, mmụta dị oké mkpa nke iche echiche echiche, na ikike iji ghọta ngwa ngwa "enweghị uru gụnyere" mmemme.
Black Belts na-elekwasị anya na-egbu egbu, ọ bụ ezie na agbụrụ na Master Black Belts lekwasị anya n'ịghọta ọrụ na ikike maka isii Sigma. Ọhụụ anyị isii Sigma Black Belt na-akwadebe nye ndị a ngwá ọrụ ha nwere iji nweta akwụkwọ ikikere Sigma Black Belt nke isii, nke dị mkpa iji nyere ha aka imegide ha dị ka isi nke usoro isii sigma na nzukọ ha. Sigma Black Belt isii na-akwadebe na-egosi ha otu esi edozi achụmnta ego Sigma isii na-enye ha ohere ịdị na-elekọta ọrụ ndị a n'ime mkpakọrịta ha.
Ọtụtụ eriri akpụkpọ ụkwụ ga-ejide ọnọdụ a ruo afọ ole na ole n'ogologo oge zuru oke ma emesị ga-alọghachi n'ọrụ ọrụ ọrụ ha mgbe ọ gasịrị. Ha na-akụzi, na-emepụta, na-edu ndú na nchịkwa ozugbo na ndị ọrụ iji mezuo ebumnobi ha. A chọrọ ha ka ha jiri ọrụ nchekwa ego kwadoro na-agbachitere gburugburu $ 100,000 - $ 250,000.
Ma ọ bụ ọrụ mmadụ, ego, nzukọ, ọchịchị, ma ọ bụ ụdị ọrụ nlekọta ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ... Six Sigma Black Belt Training bụ zuru okè maka onye ọ bụla na-enwe olileanya inweta ọtụtụ n'ime ọrụ ha. Nke a bụ naanị ole na ole n'ime ihe ndị ị ga - ahụ na eriri nwa gị na - akwadebe:
Ndị ahịa na-elekwasị anya ahịa
Ụdị a tụrụ
Ịkụzi ọrụ dị iche iche dị irè
Amass / njirimara ikike
Black Belt gị nke na-agba ọsọ isii ga - ekwenye na ị dị njikere:
Na-arụkọ ọrụ ma na-aghọta ihe ndị ị chọrọ
Kwalite ikike nke usoro iji chọpụta ọchịchọ ndị ahịa
Ọfụiche na-agbasa ma họrọ ndị ọrụ ibe
Soro ndị ọrụ nlekọta na-arụ ọrụ usoro isii maka Sigma
Gaa dị ka ọkachamara n'ime
Ebube isii nke Sigma
Kwadebe / nduzi / onye nkuzi Green Belts na ndị dị iche iche
Gaa dị ka mkpali maka mgbanwe usoro
Ngalaba nwere obi ụtọ na nkwado na-aga n'ihu
Nye nzaghachi maka njikwa